नक्सा आयो पढ्न नपाइने , रेल आयो चढन नपाइने , कस्तो खालको विकास ? – yuwa Awaj
काठमाडौ : नेपाली इतिहासम दुई तिहाई बहुमतका साथ नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृ’त्वमा सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री बनेकै दिन केपी ओलीले भनेका थिए, ‘लेखेर राख्नुस् आजको दुई वर्ष भित्र केके विकास हुन्छ। नेपालीको आर्थिक अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्छ।
तर, भारतविरुद्ध बोलेर राष्ट्रवादी पल्टिने ओलीले अहिले भारत सामू निरिह छन्। केही दिन अघि मात्रै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको नयाँ नक्सा समेटेर केही पुस्तकहरु प्रकाशन गर्याे। तर, उक्त पुस्तक बजारमा वितरण नगर्न र अब प्रकाशन नगर्न पनि ओलीले निर्देशन दिए।
यीनै केपी अ‍ोलीले अलि पहिले अब विद्यालय तहका पुस्तकमा पनि नयाँ नक्सा प्रकाशसन हुने बताएका थिए।अहिले प्रकाशनर वितरण रोकिएको छ।
त्यस्तै वर्षाैँ पहिले सम्झौता भएको रेल ल्याएर केपी ओलीले ल्याएको भनेर हल्ला फैलाउन पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ताले भ्याए। उक्त रेल अहिले त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। उक्त रेल पनि अहिले सर्वसाधारणको लागि चढ्न नमिल्ने गरी बन्द गरिएको छ । -गोरखा आवाज
Prevअभागीको हद ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो…हेर्नुहोस् ।
Nextबधाई ! बेलायती प्रहरीका सल्लाहकार बने नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत शिवजी श्रेष्ठ…हेर्नुहोस् ।
केपी ओलीविरु’द्ध प्रचण्ड–नेपालको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा !
नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने रुसले लगानी गर्ने…हेर्नुहोस् ।
नेकपा ‘जोड्न’ चिनियाँ कसरत